Telefoonka ugu horreeya ee Huawei ee leh 5G wuxuu noqon doonaa laablaab | Androidsis
Dhowr maalmood ka hor Huawei ayaa shaaca ka qaaday taas taleefankeedii ugu horreeyay oo leh 5G ayaa imaan doona bartamaha sanadka soo socda. Waxay u badan tahay inay noqon doonto Juun 2019 marka taleefankan la furayo suuqa. Wax badan oo kale lagama sheegin qalabka, marka laga reebo inuu qaadi doono Kirin 980 oo ah processor-ka, oo ay weheliso modem gaar ah oo u oggolaanaya inuu yeesho 5G.
Dhowr maalmood ka dib Waxaan helnay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taleefankan ay Huawei soo bandhigi doonto sanadka soo socda. In yar ayaan bilaabay inaan fikrad cad ka helno. Runtuna waxay tahay inay ku ballanqaadayso inay noqoto taleefan aad u xiiso badan.
Maaddaama shirkadda lafteeda ay taas xaqiijisay taleefankan 5G-ga ah ee ugu horreeya ayaa noqon doona mid la laaban karo. Waxaa dhawaan la xaqiijiyay in Huawei ay bilaabi doonto taleefankeedii ugu horeeyay ee isku laabmaya sanadka 2019. Waxay u muuqataa in marka lagu daro inuu yahay kan ugu horreeya ee la laaban karo, wuxuu sidoo kale yeelan doonaa 5G.
Marka shaashadda qalabka ayaa awoodi doona inay foorarto. Xilligan nidaamka ay sumcadda Shiinaha ku soo bandhigeyso taleefankeeda lama yaqaan. Shirkado kala duwan ayaa ka shaqeeya noocyada taleefannada, waxayna u muuqataa in mid kastaaba uu horumarinayo nidaam u gaar ah arrintan. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko waxa sumaddu bixiso.
Marka wax waliba waxay ku bilaabmaan isku mid. Sida Huawei wuxuu sheegay in taleefankiisii ​​ugu horreeyay ee isku laaban uu imaan doono bartamaha sanadka soo socda. Dhowr maalmood ka horna waxay ku yidhaahdeen isla wax ku saabsan taleefankoodii ugu horreeyay ee 5G. Marka wax waliba waxay muujinayaan inay isku qalab yihiin, in kastoo laga yaabo inaysan kiisku ahayn.
Shaki la'aan, sumadda Shiinaha ayaa noqonaysa mid ka mid ah noocyada ugu horreeya suuqa. Huawei wuxuu 5G ku riixayaa suuqyo kala duwan, waxayna noqon doontaa shirkaddii labaad ee soo saarta taleefan isku laaban suuqa, ka dib Samsung. Bilooyinkan oo dhan waxaan heli doonnaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qalabkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Telefoonka ugu horreeya ee 5G ee Huawei wuxuu noqon doonaa laablaab